Ukudluliswa Kokwenza | Law & More B.V. | Abase Netherlands
Blog » Ukudluliswa Kokwenza
Uma uhlela ukudlulisela inkampani komunye umuntu noma ukuthatha inkampani yomunye umuntu, ungazibuza ukuthi ngabe lokhu kuthathwa kwemali kuyasebenza yini nakubasebenzi. Ngokuya ngesizathu sokuthi kungani inkampani ithathwa nokuthi kwenziwa kanjani lokho kuthathwa, lokhu kungathandeka noma kungathandeki. Isibonelo, ingabe ingxenye yenkampani ithathwa yinkampani enolwazi oluncane ngemisebenzi enjalo yebhizinisi? Uma kunjalo, kungakuhle ukuthatha abasebenzi abakhethekile futhi ubavumele baqhubeke nemisebenzi yabo ejwayelekile. Ngakolunye uhlangothi, ngabe kukhona ukuhlangana kwezinkampani ezimbili ezifanayo ukuze kulondolozwe izindleko? Lapho-ke abasebenzi abathile bangahle bangathandeki kangako, ngoba ezinye izikhundla sezigcwalisiwe futhi nokonga okukhulu kungenziwa ngezindleko zabasebenzi. Ukuthi abasebenzi kufanele bathathwe yini kuncike ekusebenzeni komthethonqubo 'ekudlulisweni kokwenza'. Kule ndatshana, sichaza ukuthi kunini lapho kwenzeka nokuthi iyini imiphumela.
Kunini ukudluliswa komsebenzi?
Lapho kukhona ukudluliswa kwesibopho kulandela iSigaba 7: 662 seDutch Civil Code. Lesi sigaba sithi kufanele kube nokudluliswa ngenxa yesivumelwano, ukuhlanganiswa noma ukuhlukaniswa kweyunithi yezomnotho lokho igcina i- identity. Iyunithi yezomnotho "yiqembu lezinsizakusebenza ezihleliwe, ezinikele ekuqhubekeni nomsebenzi wezomnotho, noma ngabe lowo msebenzi uphakathi noma awusekeli". Njengoba ama-takeovers enziwa ngezindlela ezahlukahlukene ekusebenzeni, le ncazelo yezomthetho ayinikeli umhlahlandlela ocacile. Ukuchazwa kwalo ngakho-ke kuncike kakhulu ezimweni zecala.
Amajaji ngokuvamile abanzi ekuchazeni kwawo ukudluliswa komsebenzi njengoba uhlelo lwethu lwezomthetho luthatha ukubaluleka okukhulu ekuvikelweni kwabasebenzi. Ngokwesisekelo somthetho wamacala akhona, kungaphetha ngokuthi ibinzana lokugcina elithi 'ibhizinisi lezomnotho eligcina ubunikazi balo' libaluleke kakhulu. Lokhu kuvame ukuthinta ukuthathwa unomphela kwengxenye yenkampani nezimpahla ezihambisanayo, amagama ezohwebo, abaphathi kanye nabasebenzi. Uma ngabe kubandakanyeka kuphela ngakunye kwalokhu, imvamisa akukho kudluliswa kwesibopho, ngaphandle kwalapho lesi sici sithatha isinqumo sokuthi ungubani lowo msebenzi.
Ngamafuphi, kuvame ukudluliswa kwesibopho ngokushesha lapho ukuthatha imali kubandakanya ingxenye ephelele yesibopho ngenhloso yokwenza umsebenzi wezomnotho, obuye ubonakale ngobunikazi bawo obugcinwayo ngemuva kokuthatha. Ngakho-ke, ukudluliswa (kwengxenye yebhizinisi) elinomlingiswa ongesona sesikhashana maduzane kwenza ukudluliswa komsebenzi. Icala lapho ngokusobala kungekho ukudluliswa kwesivumelwano kungukuhlanganiswa kwesabelo. Esimweni esinjalo, abasebenzi bahlala enkampanini efanayo ngoba kukhona ushintsho kuphela kubunikazi bamasheya.
Imiphumela yokudluliswa komsebenzi
Uma kukhona ukudluliswa kwesibopho, ngokomthetho, bonke abasebenzi abakha ingxenye yomsebenzi wezomnotho badluliswa ngaphansi kwemibandela yesivumelwano sokuqashwa kanye nesivumelwano sokubambisana esisebenza nomqashi wangaphambilini. Ngakho-ke akudingekile ukuphothula inkontileka entsha yokuqashwa. Lokhu kuyasebenza futhi uma amaqembu engazi ngokusetshenziswa kokudluliswa kokuzibophezela kanye nabasebenzi lowo obedlulisile abengakwazi ngesikhathi sithathwa. Umqashi omusha akavunyelwe ukuxosha abasebenzi ngenxa yokudluliselwa kwesivumelwano. Futhi, umqashi wangaphambilini unesibopho kanye nomqashi omusha unyaka owodwa ngaphezulu wokufeza izibopho ezivela enkontilekeni yokuqashwa eyavela ngaphambi kokudluliswa kwesithembiso.
Akuzona zonke izimo zokuqashwa ezidluliselwa kumqashi omusha. Uhlelo lwempesheni luhlukile kulokhu. Lokhu kusho ukuthi umqashi angafaka uhlelo olufanayo lwempesheni kubasebenzi abasha njengoba enza kubasebenzi bakhe bamanje uma lokhu kumenyezelwe ngesikhathi sokudluliswa. Le miphumela isebenza kubo bonke abasebenzi inkampani edlulisayo esebenza nabo ngesikhathi sokudlulisa. Lokhu kusebenza futhi kubasebenzi abangawulungele umsebenzi, abagulayo noma izinkontileka zesikhashana. Uma umsebenzi engafuni ukudlulisa ibhizinisi, angasho ngokusobala ukuthi ufisa ukunqamula inkontileka yokuqashwa. Kungenzeka kuxoxiswane ngezimo zokuqashwa ngemuva kokudluliswa kwenkampani. Kodwa-ke, izimo ezindala zokuqashwa kufanele ziqale zidluliselwe kumqashi omusha ngaphambi kokuba lokhu kwenzeke.
Lo mbhalo uchaza ukuthi incazelo esemthethweni yokudluliswa kwesibopho igcwaliseka masinyane ekusebenzeni nokuthi lokhu kunemiphumela emikhulu maqondana nezibopho kubasebenzi besibopho. Ukudluliswa kokuzibophezela kwenzeka lapho kwenzeka lapho iyunithi yezomnotho yebhizinisi ithathwa ngomunye isikhathi esingeyona sesikhashana, lapho kugcinwa khona ubunikazi bomsebenzi. Njengomphumela womthethonqubo wokudluliswa kokuzibophezela, umuntu ophethe kumele aqashe abasebenzi (ingxenye) yesibopho esidlulisiwe ngaphansi kwezimo zokuqashwa ezazivele zisebenza kubo. Umqashi omusha ngakho-ke akavunyelwe ukuxosha abasebenzi ngenxa yokudluliselwa kwesithembiso. Ungathanda ukwazi okwengeziwe ngokudluliswa kwesibopho nokuthi lo mthetho uyasebenza ezimweni zakho ezithile? Ngemuva kwalokho sicela uxhumane Law & More. Abameli bethu bakhethekile emthethweni wezinkampani nomthetho wezabasebenzi futhi bazokujabulela ukukusiza!
Thumela Previous Isivumelwano selayisense
Post Next Isivumelwano Sabanikeli: Yini okudingeka uyazi?